အင်မတန်ကို တန်မှတန်တဲ့ Nature Republic ရဲ့ JULY LOVE PROMOTION ကြီး – YANGON STYLE
အင်မတန်ကို တန်မှတန်တဲ့ Nature Republic ရဲ့ JULY LOVE PROMOTION ကြီး
NATURE REPUBLIC ကတော့ အာရှတခွင်လုံးမှာ အချစ်ခံရဆုံး ကိုရီးယား အလှကုန် အမှတ်တံဆိပ်ကြီးဟု ကမ္ဘာ့အလှကုန်သမိုင်းမှာ နေရာယူထားရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုလို NR ကို တစ်ဟုန်ထိုး အဆက်မပြတ် ချစ်ပေးကြတဲ့ Fans ချစ်သူလေးတို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ပျော်ရွှင်ရစေဖို့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် NR JULY LOVE PROMOTION ကြီးကို အခမ်းနားဆုံး ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဥ်ကတော့ ချစ်ပြီးရင်းချစ် အဆက်မပြတ်ချစ် လို့ အမည်ရပါတယ်။ အစီအစဥ်(၄)မျိုးတောင်ရှိလို့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအုံးနော်။
ချစ်ပြီးရင်းချစ် အဆက်မပြတ်ချစ် အစီအစဉ် ( ၁ )
NATURE REPUBLIC ရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ချစ်ခံရတဲ့ Products ပေါင်းများစွာထဲမှ Products ပေါင်း ( ၁၂၀ ) ကျော်ကို အခမ်းနားဆုံး UP TO 60% OFF နှင့် BUY 1 FREE 1 DISCOUNT အစီအစဉ်ကြီး !
ချစ်ပြီးရင်းချစ် အဆက်မပြတ်ချစ် အစီအစဉ် ( ၂ )
မည်သည့် Products ကိုမဆို ကျပ် 60,000 ဖိုးဝယ်ယူအားပေးရုံဖြင့် ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ 🌟💰NR 5000ks Gift Card💰🌟 ကြီးကို ဆက်လက် ပေးအပ်သွားမယ့် အစီအစဉ်ကြီး !
ချစ်ပြီးရင်းချစ် အဆက်မပြတ်ချစ် အစီအစဉ် ( ၃ )
ဒါ့အပြင် မည်သည့် Products ကိုမဆို ကျပ် 60,000 ဖိုးဝယ်ယူအားပေးရုံဖြင့် ဖော်ပြပါပုံထဲကအတိုင်း NR 10-in-1 Fresh Herb Snail Facial Foam 170ml ( FULL SIZE ) ရှယ်ဗူးကြီး ( သို့) NR PEARL DE CAVIAR GOLD FACIAL FOAM ( FULL SIZE ) ကြီးပါဝင်တဲ့ ကျပ် ၂၆၉၀၀ တန်ဖိုးရှိ ( 26,900ks Value! ) ✨🦄 NR JULY LOVE GIFT SET 🦄✨ ကြီး တဆက်လုံးကို ထပ်မံကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တစ်ပြုံတစ်မကြီး ပေးအပ်သွားမယ့် အစီအစဉ်ကြီး !
ချစ်ပြီးရင်းချစ် အဆက်မပြတ်ချစ် အစီအစဉ် ( ၄ )
ဒါတင်မက NR မှ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ဖိုးမှစပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် ✨🦋 FREE DELIVERY ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း JULY တစ်လလုံးအတွက် ဆက်လက်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်နော် !
ချစ်ပြီးရင်းချစ် အဆက်မပြတ်ချစ် အစီအစဉ် တွေကတော့ July 1, 2020 မှ July 31, 2020 ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်း ခံစားကြည့်ရှုပေးပါအုံးနော်။
အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ့်အစီအစဥ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ Nature Republic Myanmar Facebook page မှာ သွားရောက်စုံစမ်းကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။